लि Links्कहरू सिर्जना गर्ने बेलामा कसरी Google निषेधहरू रोक्न सकिन्छ - Semalt विशेषज्ञहरूको चिन्ता
जब तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को लागी खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, धेरै गल्ती गर्नेहरूले गुगललाई तपाइँको साइटलाई दण्ड दिन सक्छन्। यसले नराम्ररी क्रममा राख्दछ तर तपाईंको SEO प्रयासलाई व्यर्थ बनाउँदछ। उदाहरण को लागी, कालो टोपी एसईओ टेकनीकहरु जस्तै योजनाहरु बाट लिंक खरीद गर्दा तपाईलाई तत्काल जरिवाना हुन्छ। यस कारणले गर्दा, Google सँग एल्गोरिथ्मको साथ काम गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन।
Igor Gamanenko, Semalt को ग्राहक सफलता को लागी जिम्मेवार, लि creating्क बनाउने बेला Google को दण्डहरु बाट कसरी जोगिने भनेर वर्णन गर्दछ।
गुगलले एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ तिनीहरूका खोज क्वेरीहरूको क्रममा वेबसाइटहरू बनाउन। गुगलले प्रयोग गरेको दुई मापदण्डहरू हुन्:
यो कति उपयुक्त छ तपाईंको साइट सामग्री केहि खोज क्वेरीहरूमा आधारित छ। उदाहरण को लागी, तपाई "टाउको दुखाइ" भन्ने शव्द खोज्न सक्नुहुन्छ। गुगलले माइग्रेन औषधोपचारको साथ साइटहरू समावेश गर्न रुचाउँदछ।
यो तपाइँको सामग्री को आला को मास्टरी को मापन र यो तपाइँ लाई दिन्छ विश्वास को उपाय हो। उदाहरण को लागी, गुगलले अमेजनलाई मुख्य रूपमा खरीद खोज क्वेरीको लागि वर्गीकृत गर्न सक्दछ किनभने उनीहरूको असाधारण बिक्री ड्राइभि। सीपको कारण। त्यहाँ एक डोमेन प्राधिकरण हो, पूरै वेबसाइट जस्तै, र पृष्ठ अधिकार जुन एक विशेष पृष्ठको लागि वर्गीकरण मापन हो।
दुबै प्राधिकरण र प्रासंगिकताले तपाईंको वेबसाइटको स्तर निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। जहाँसम्म, गुगलले इनबाउंड लिंकहरूको गुणस्तर र मात्रा प्रयोग गर्दछ जुन साइटको साइट वा पृष्ठ संकेत गर्दछ।
कसरी अधिकारलाई प्रभाव पार्छ।
ब्याकलिks्कहरू अर्को वेबसाइटबाट अधिकार प्राप्त गर्ने अवधारणामा काम गर्दछन्। जब तपाइँको साइटले तपाइँको पृष्ठमा लि links्क गर्दछ, त्यहाँ पृष्ठसँग जोडिएको केहि अधिकार हुन्छ र साथै सम्पूर्ण साइटमा। यही कारणले आधिकारिक साइटहरूमा लिंकहरू सिर्जना गर्नु उत्तम हो, तर सबैभन्दा गाह्रो काम।
निर्माण सम्बन्धलाई एक बुद्धिमान र प्राकृतिक तरीकाको आवश्यक पर्दछ। धेरै धेरै दुर्भावनापूर्ण लिंकहरूले पेनाल्टी लिन सक्छ। गुगलको पेन्गुइन एल्गोरिथ्मले क्रमबद्धता कम गरेर मेनिपुलेटिभ लिंकलाई दण्ड दिन्छ जुन सुधार गर्न गाह्रो हुन सक्छ। राम्रो अभ्यासले वास्तविक सामग्रीलाई तपाईंको सामग्रीमा लिंक दिन्छ।
साझा चुनौतिहरू जब तिनीहरूले लि earn्कहरू कमाउँछन्
निर्माण लिंकहरू कुनै ग्यारेन्टी छैन कि व्यक्तिहरू तपाईंको वेबसाइटमा जडान हुनुपर्दछ। वास्तवमा, धेरै सामाजिक मिडिया मार्केटिंग बिना धेरै लिंकहरू प्राप्त गर्न यो सम्भव छ। अन्य पोष्टहरूमा तपाई सोशल मिडियामा धेरै दृश्यहरू र क्लिकहरू पाउन सक्नुहुन्छ, तर कोहीले तपाइँको वेबसाइटमा क्लिक गर्दैन। यस दृष्टिकोणमा यो र अन्य धेरै सीमितताहरू छन्।
२. तपाईंको वेबसाइटको गति।
तपाइँको साइट संवेदनशील हुन को लागी एक स्वयम्सेवक आगन्तुक सम्झना छैन। तपाईंको होस्टिंग प्याकेजको ब्यान्डविथमा निर्भर गर्दै। ढिलो गतिले तपाईंलाई कम अधिकार दिनेछ। ऊ तपाईंको स्वाभाविक रूपमा आर्जित आगन्तुकहरूमा भरोसा गर्न बाध्य हुन सक्छ।
Authority. अधिकार स्कोर।
पेन्गुइन एल्गोरिथ्मले ०-१०० को मापनमा तपाईंको ब्याकलिks्कको अधिकार स्कोर प्रयोग गर्दछ। तपाइँको ब्याकलिंक्सको गुण एकदम महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरण को लागी, एक आधिकारिक वेबसाइट को ब्याकलिंक्स मतलब तपाइँको साइट मा अधिक अधिकार अधिक कम अधिकार संग एक साइट बाट ब्याकलिंक्स को सट्टा हुनेछ। यसैले धेरै ब्लगहरू म्यानुअल रूपमा जडित छन्।
लि building्क निर्माण प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा गरिनु पर्छ एसईओ दण्डहरु बाट बच्न। माथिको सल्लाहहरूबाट, यो स्पष्ट छ कि तपाईं गुणवत्ताको ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ Google को एल्गोरिथ्मद्वारा कालोसूची नभएका विधिहरू प्रयोग गरेर। उदाहरण को लागी, अतिथिहरु लाई पोष्ट गर्नु, गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गर्नु वा तपाईको वेबसाइटमा प्राकृतिक रूपले मूल्यवान योगदानहरु थप्ने।